मेरा प्रिय पाठकहरु !
मैले २०६५ फागुन ३ गतेदेखि अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकमा लेख्तै आएको थिएँ । पत्रिकाका सम्पादक मेरा प्रिय मित्र जिवेन्द्र सिम्खडा र मेरो प्यारो भाइ राजकुमार रेग्मीका कारण २०६९ चैत मसान्तसम्म हरेक शनिबार मैले त्यसैमा लेख्तै आएँ । "बाँचेका मान्छे" स्तम्भ अन्तर्गत यस जगतमा जन्मेर कीर्ति राख्ने व्यक्तिहरुलाई प्रस्तुत गर्न पाएकोमा मलाई हर्ष लागेको छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा गत वर्ष अन्नपूर्ण परिसरमा मेरो स्वाभिमानमा आँच आँउने किसिमको छनक मैले अनुभूत गर्न थालें । त्यसैले मैले सिम्खडाजीलाई "अब म विदा पाउँ" भनेर अनुरोध गरेको थिएँ । तर उहाँले मलाई विदा दिन चाहानु भएन । जसले गर्दा मेरो जेजस्तो व्यस्तता भए पनि साथीभाइको मायामा म हार्न पनि सकिन । अनि फेरि म लेख्तै जान थालें ।
एकातिर त्रिमूर्ति निकेतनमा मेरो मन, वचन र कर्म जोडिएको छ भने अर्कातिर नइ प्रकाशनलाई मैले मेरो जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण स्तम्भ मानेको छु । यी दुई संस्थामा नै म समाहित भएको छु र बिहान उठेदेखि राति अबेरसम्म पनि म यसैमा समर्पित भैरहेको छु । त्यसमाथि गत वर्ष विश्न नारी नेपाली साहित्य सम्मेलनको अति ठुलो जिम्मेबारी पनि मेरा काँधमा आएको छ । त्यसैले यी कामहरु सुचारु रुपमा सञ्चालन गर्न र सफल पार्ने दायित्व समेत मैले लिएको कारण मेरो इच्छा हुँदाहुँदै पनि मलाई नियमित स्तम्भकारका रुपमा लेख्न धेरै असजिलो भइरहेकै थियो ।
"अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकमा मैले लेख्न थालेको पाँच वर्ष लाग्न आँटिसके छ । मलाई केही महिना फुर्सद दिनु पर्यो । पछि फेरि मलाई अन्नपूर्णपोष्टमा नै लेख्न दिनुहोला ।" २०६९ सालको मसान्तको विहानीमा मेरो लेख काखमा राखेर मैले अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकका नव सम्पादक मेरा प्रिय मित्र गुणराज लुइँटेललाई आग्रह गरेको थिएँ । "किन र यस्तो ? तपाईलाई कसैले केही त भनेन ? लेखिराख्नु भए हुन्थ्यो ।'' त्यतिबेला लुईँटेलजीको प्रतिउत्तर आएको थियो । उहाँको मप्रतिको सकरात्मक, नरम र आत्मीय सम्बन्ध निक्कै पुरानो पनि हो । त्यसैले उहाँले मलाई बुझ्नु पनि भएको छ ।
लुइँटेलजीलाई मैले मेरो निर्णय सुनाई सकेपछि मेरो शरीरै हलुङ्गो भएको मलाई महसुस भयो । खास गरेर निकै पुराना व्यक्तिहरुबारे लेख्नु मेरो रुचि भएकाले र सो बारेको सामग्री सङ्कलन गर्न पनि मलाई निकै हम्मे पर्थ्यो । सामग्री सङ्कलनपछि मलाई एक जनाको जीवनी लेख्न झन्नै दुई तीन दिन मामुली पनि लाग्थ्यो । प्रायशः अप्राप्य सामग्रीका कारण लेख्ने क्रममा कहिले तिथि मिल्दैन, कहिले मिति मिल्दैन र कहिले केके मिल्दैन, मिल्दैन । हुनत गीत, निबन्ध, प्रबन्ध र समीक्षा पनि मैले लेख्ने विधा हुन् ।
साहित्यिक फाँटमा डुब्दै जाँदा नेपाली समाजका लागि अत्यन्त उपयोगी हुने जीवनीविधा नेपाली साहित्यमा भने अलि पछि नै परेको अनुभूति मलाई भयो । अरुले नगरेका र समाजका लागि आवश्यकीय चुनौतिपूर्णका काम गर्नु पनि मेरो रुचिको विषय मानिन्छ । त्यसै कारणले पनि जीवनीविधामा लेख्न त्यति सजिलो नहुँदा नहुँदै पनि मैले आफ्नो साहित्यिक यात्रामा जीवनीविधालाई प्रमुखताका साथ भित्र्याएको हुँ । समय सन्दर्भमा सत्यतथ्य खोजेर जनसमक्ष प्रस्तुत गर्ने यस कामलाई पनि मैले एउटा जिम्मेवारीका रुपमा स्वीकार्दै आएको छु ।
२०५० सालतिर "नेपालीपत्र साप्ताहिक"मा मैले स्तम्भ लेख्न सुरु गरेको थिएँ । जनार्दन आचार्यको सम्पादनमा प्रकाशित उक्त पत्रिका त्यतिबेला निक्कै चर्चित थियो । त्यहाँ मैले झन्नै साडे दुई बर्षसम्म साप्ताहिक रुपमा लेखिरहें । कमल जोशी र आचार्य दाइका वीच फुट भएपछि आचार्य दाइ र म समेत जोडिएर "समकालीन साप्ताहिक" प्रकाशन गर्न थाल्यौ । मैले सो पत्रिकामा पनि स्थापनाकालदेखि करिब साडे दुई बर्षसम्म निशुल्क र नियमितरुपमा स्तम्भ लेखिरहें ।
अनि रङ्गिन शैलीमा 'कान्तिपुर' दैनिकको नेपालमा स्थापना भयो । दैनिक ठूलो पत्रिका भनेको 'गोरखापत्र'मात्र हुनसक्छ भन्ने मान्यतालाई भत्काउन सफल कान्तिपुरको प्रकाशन नेपाली पत्रकारिताको इतिहासमा निकै ठूलो क्रान्ति हो । नियमित र स्तरीय प्रकाशनका कारण अहिलेसम्म पनि पाठकमाझ कान्तिपुरक्रेज सुचारु पाइन्छ । स्थापनाको केही वर्षपछि मैले हरेक सात दिनमा नियमित रुपमा छ महिनासम्म त्यहाँ पनि साहित्यका प्रमुख समालोचकको जीवनी लेखिरहें । त्यहाँ फणिन्द्र नाउँधारी नेपालले भिलेन खेलेपछि मैले लेख्न छाड्नु परेको थियो । तर त्यहाँका लेख पनि भेला पारेर मैले 'नेपाली साहित्यका प्रमुख समालोचक'नामक ग्रन्थै निकालें । जुन किताव त्रिभुवन विश्वविध्यालयको नेपाली विषयक बीए र एम्एमा पनि पढ्नु पर्छ ।
त्यसपछि म स्पेशटाइम दैनिकमा साप्ताहिक स्तम्भकार भएँ । त्यहाँ मैले लैनसिहं वाङ्देललाई सकेसम्म पूर्णता दिएँ । "तपाईले यो ठुलो काम गर्न थाल्नु भएको छ" वाड्ङ्देल सारै खुसी भएको बेहोरा हरेक हप्ता पत्रिका हात पर्ने बितिक्कै उनी मलाई फोन गरेर अभिव्यक्त गर्थे । पछि ४०० पृष्ठको "वाङ्देलको जीवनयात्रा" प्रकाशनमा पनि आयो र त्यस ग्रन्थको भूमिका पनि वाङ्देलले नै लेखिदिएका थिए । तर दुक्खको कुरा त्यसपत्रिकामा मैले लेख्न थालेपछि पत्रिका नै बन्द भयो । जे होस् त्यहाँ पनि मैले एक वर्ष स्तम्भ लेखें ।
अनि मलाई मेरो अर्को प्रिय भाइ कुमार यात्रुले राजधानी दैनिक पु्र्याएका थिए । त्यहाँ करिब तीन महिना जति दैनिक रुपमा लेखेर "कोइलीदेवीको जिन्दगानी" नाउँको मेरो एउटा किताबै तयार भयो र त्यस ग्रन्थमा पनि दिदीले नै भूमिका लेखिदिएकी थिइन् । मैले कोइली दिदीको सेरोफेरो लेख्ता दिदी पनि सारै रमाएकी थिइन् ।
फेरि म अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकको स्तम्भकारमा दरिएको थिएँ । साथै मैले कान्तिपुर एफएमलाई पनि हरेक हप्ता नौ महिना जति "देवकोटाको जीवनशैली" नियमित प्रदान गरेको थिएँ । हेम सुवेदीले मेरो त्यो लेखनलाई उनको प्रभावशाली वाकशैलीद्वारा जीवन्त नै पारिदिएका थिए । अनि फाट्टफुट्ट त धेरै पत्रिका र साहित्यिक पत्रपत्रिकामा मेरा लेख रचना आइरहने पनि गरिरहेका छन् । अहिलेसम्म मेरा १२०० भन्दा बढी फुटकर लेखरचनाहरु प्रकाशित भैसकेका छन् भने ४०० भन्दा बढी व्यक्तिका जीवनीहरु प्रकाशित भैसकेका छन् ।
मेरा प्रिय पाठकवृन्द ! मैले लेखेका कति कुराहरुसँग तपाईहरु सहमत हुनुहुन्थ्यो र कति लेखहरुमा असहमत हुनुहुन्थ्यो ! तर मैले मनपरि गरेर मनमौजीले केही लेखिन । मैले आफ्नो लेखन धर्म साक्षी राखेर जे लेख्नु पर्थ्यो त्यही मात्र लेखेको थिएँ ।
साहित्यिक संगठनमा सक्रिय भएर पनि मैले मेरा पाठकहरुका लागि मेरो बुताले भ्याएसम्मको मिहिनेतका साथ आफ्ना लेखरचनाहरु प्रस्तुत गर्दै आएको थिएँ । पाठकहरुको माया पाएर नै मैले एकनास लेखिरहन पनि सकेको हुँ । किनभने पाठक भनेका लेखकका लागि ईश्वर नै हुन् । म एउटा लेखक भएको कारण मलाई सँधै पाठक चाहिन्छ, पाठकको माया चाहिन्छ र पाठको सुझाव पनि चाहिन्छ । त्यसैले आगामी दिनमा अन्नपूर्णपोष्टमा मेरो अनुपस्थितिको जानकारी यहाँहरु समक्ष निवेदन गर्नु मेरो नैतिकधर्म पनि हो । भविष्य मेरो अनुकूल भएमा म फेरि तपाईंहरु समक्ष उपस्थित हुने वाचाका साथ अहिलेलाई अन्नपूर्णपोष्टको स्तम्भकारको भूमिकाबाट ओझल परेको छु ।